प्रशासन र प्रहरी प्रमुखको मौनता आश्चर्यजनक | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
प्रशासन र प्रहरी प्रमुखको मौनता आश्चर्यजनक
२०७१ मंसिर २८, आईतवार ०४:५६ गते
गत शुक्रबार चितवनको सदरमुकाम भरतपुरमा एक जना सरकारी कर्मचारीको विवाहमा आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी गाडी र यौटा प्रहरी भ्यानसमेत विवाहको जन्ती बोक्न प्रयोग भएको समाचार फोटोसहित यसै दैनिकमा प्रकाशित भएपछि यससम्बन्धमा सार्वजनिक चासो बढेको पाइएको छ । अरुलाई नियम–कानुन पालना गर्न लगाउने र नमान्नेलाई आर्थिकदेखि भौतिक कारबाहीसम्म गर्न पछि नपर्ने प्रहरी संगठनले आफ्नो ड्युटीको गाडी जन्ती ओसार्न प्रयोग गर्नु कुन हदसम्म औचित्यपूर्ण छ भन्ने कुराको चितवनका प्रहरी प्रमुखले जवाफ दिनु आवश्यक भएको छ । यस्तै अन्य सरकारी कार्यालयका प्रमुख, जसको गाडी कार्यालय समयमै जन्ती बोक्न प्रयोग गराएका थिए, उनीहरुलाई पनि कसुरअनुसारको सजाय हुनुपर्छ ।
स्मरणीय छ, सरकारी कार्यालयहरु र तिनको प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधनहरु जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित छन् । यस अर्थमा आफ्नो पद र जिम्मेवारीको बोध गर्न नसक्ने कार्यालय प्रमुखहरु दोषका भागी देखिएका छन् । प्रशासन र प्रहरीको काम जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिनु र सर्वत्र नियम र कानुनको पालना गर्नु, गराउनु हो । त्यतिमात्र नभएर सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनले तोकेको मापदण्ड र सीमाभित्र विवाह भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने कामसमेत प्रहरी प्रशासनको हो । तर, जब प्रहरीको गाडी आफैँ जन्ती ओसार्न थाल्छ, अनि सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन आफैँ लज्जित हुनुसिवाय अरु कुनै विकल्प देखिँदैन ।
यसरी विवाहमा सरकारी गाडीको प्रयोग गर्ने व्यक्ति पनि पहुँचवाला नै हुनुपर्छ । के ठूलालाई मुलुकको कानुनले छुन सक्दैन ? भन्ने प्रश्न अहिले चितवनका सचेत नागरिकहरुले गरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा समाचार लेख्ने पत्रकारले प्रजिअ र चितवनका प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी गराएर प्रतिक्रिया लिन चाहँदा पनि उनीहरु यो विषयप्रति त्यति गम्भीर देखिएनन् । प्रहरी प्रमुखले अनभिज्ञता प्रकट गरे भने प्रजिअले आफू व्यस्त भएको कुरा बताएर विषयमा प्रवेश हुन चाहेनन् । जिल्ला हाँक्ने हाकिमहरु नै जब सरकारी सवारीसाधनको दुरूपयोगप्रति अनभिज्ञता र मौनता प्रदर्शन गर्छन् भने आमनागरिक अब उजुरी गर्न कहाँ जाने भनेर अलमलमा परेका छन् ।
नैतिकता र सदाचारको पालना मुलुकका प्रत्येक नागरिकले गर्नुपर्दछ । यो कुरा सभ्य समाजको लक्षण हो भने समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो । सार्वजनिक पद धारण गरेर बसेका व्यक्तिहरुबाट सदाचार र नैतिकताको कुरा अझ बढी जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । कानुनले कानुनको अज्ञानतालाई माफी दिँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता र अवधारणा रहेको छ । यी कुराहरु किन उल्लेख गर्नु आवश्यक परेको हो भने चितवनका प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखले व्यक्तिविशेषको विवाहमा सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग भएको कुरालाई थाहा छैन भनेर उम्किन पाउँदैनन् । बरू, उनीहरुले कुन–कुन सरकारी कार्यालयका गाडीहरु यसरी जन्ती ओसार्न प्रयोग गरिएको रहेछ भनेर खोजी गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सक्रियता तत्काल देखाउनु जरूरी भएको छ । अझ प्रहरी भ्यानले समेत जन्ती ओसारेको समाचार फोटोसहित दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन भैसकेपछि प्रहरी प्रमुख मौन बस्न पाउँदैनन् । अहिले नागरिक समाजले प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखको भूमिका यो घटनाका सम्बन्धमा कस्तो देखिने हो ? भनेर उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।